Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maalgelinayaa $ 850,000 kaabayaasha dadweynaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib u Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maalgelinayaa $ 850,000 kaabayaasha dadweynaha
Guddiga Dib u Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maalgelinayaa $ 850,000 kaabayaasha dadweynaha
Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada ee Gobolka Washington (CERB) wuxuu ansaxiyay $ 850,000 oo deyn iyo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalka dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka magaalooyinka Othello iyo Airway Heights, Makah Tribe, iyo Dekedda Sunnyside .
Degmada Adams - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Othello daraasad ku saabsan suurtagalnimada in la hirgeliyo wejiga koowaad ee qorshaha biyo siinta magaalada, oo ay ka mid tahay in la dhiso ceel cusub, xarun matoorro iyo keyd biyood. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Clallam - $ 50,000 oo deeq ah Makah Qabiil mashruuca Balaadhinta Iskaashatada Cape Flattery Kalluumeysatada. Daraasad suurtagal ah ayaa horumarin doonta istiraatiijiyad kor loogu qaadayo awoodda warshadda wax-soo-saarka si loo kordhiyo wax-soo-saarka qiimaha leh, iibka cusub iyo shaqo abuurka. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Spokane - $ 50,000 oo deeq ah magaalada Airway Heights oo loogu talagalay daraasadda suurtagalnimada si loo horumariyo qorshe guud ee Xarunta Warshadaha ee Airway Heights. Mashruucu wuxuu soo saari doonaa falanqeyn “ugu adeeg iyo adeegsi wanaagsan”, qiimeyn ku saabsan suurtagalnimada dhaqaalaha, aqoonsiga goobaha horumarinta mudnaanta, "Amarka waxqabadka la qorsheeyay" si loo fududeeyo horumarinta goobahaas iyo maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo istiraatiijiyadda horumarinta aagga. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Degmada Yakima - $ 400,000 oo deyn ah iyo $ 300,000 oo deeq ah Dekedda Sunnyside loogu talagalay mashruuca dhismaha Shirkadda Beerta Varietal. Mashruucan lammaanaha ah ee gaarka loo leeyahay ayaa ka kooban wax ka beddelka dhisme dhismeedka sibidhka ah oo dhererkiisu yahay 5,500-mitir oo laba jibbaaran loona isticmaalo sidii khamri, qasabad iyo xarun caag ah Shirkadda Varietal Beer Company ayaa $ 405,000 ku maalgelin doonta nidaamka foosto 10-foosto, iyadoo abuureysa 23 shaqooyin joogto ah. Lacagta CERB waxaa la jaanqaaday $ 300,000 ilaha maxalliga ah.
Doorkeennu waa inaan ka jawaabno baahiyaha maxalliga ah iyadoo aan sameyneyno go'aanno maalgashi waqtigooda ku habboon. CERB waxay leedahay rikoor la xaqiijiyay oo ah inay tahay wakiil wanaagsan oo ka tirsan lacagta dadweynaha iyo u doodista bulshada maxalliga ah, ”ayuu yiri Guddoomiyaha CERB David Rhoden.
"CERB waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta bulshooyinka reer miyiga ah iyadoo maalgelin ku sameyneysa xarumaha dadweynaha ee u sahlaya ganacsiyada cusub iyo kuwa hadda jira inay bixiyaan shaqooyin wanaagsan," ayuu yiri Brian Bonlender, oo ah agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington.
Magaalada Othello: Wade Farris, Maamulaha Magaalada, 509-488-5686
Makah Qabiil: Crystal Hottowe, Qoraa Deeq, 360-645-3292
Magaalada Hawada Dhererkas: Derrick Braaten, Agaasimaha Adeegyada Horumarinta, 509-244-2552
Dekedda Sunnyside: Jay Hester, Agaasimaha Fulinta, 509-839-7678
FARXADMakah QabiilOthelloDekedda Sunnyside
← Khariidadda Sharci-dejinta ee Gobolka ayaa Loogu Magacdaray Semifinalist Harvard 2017 Cusbooneysiinta ee Abaalmarinta Abaalmarinta Dowladda Mareykanka Guddoomiyaha Gobolka Inslee wuxuu farayaa tallaabo looga hortagayo loona joojinayo hoy la'aanta dhalinyarada →